Garsoorayaal Soomaaliyeed oo dhex-dhexaadin doona kullan ka tirsan CAF Champion League - Gool FM	twitter
Garsoorayaal Soomaaliyeed oo dhex-dhexaadin doona kullan ka tirsan CAF Champion League
(Muqdisho ) 16 Maarso 2017-Garsoorayaal Soomaaliyeed ayaa ka amba baxay garoonka Aadan Cadde iyagoo kusii jeeda dalka Itoobiya si ay u dhex dhexaadiyaan kullan ka tirsan CAF Champion League.
Soomaaliya ayaa si weyn loogu amaanaa doorka garsoorka iyagoo markaste kullamada kusoo dhex dhexaadiya si guul ay ku dheehan tahay.
Garsoorayaasha Soomaaliyeed ayaa dhex dhexaadin doono kullan ay isaga hor imaanayaan kooxaha Saint George iyo AC Leopards oo ka kala dhisan wadamada Congo iyo Itoobiya.
Xasan Maxamed Xaaji (Xasan Bari) ayaa noqondoona garsooraha dhexe ee ciyaarta halka calanwalaha 1-aad uu yaha Axmed Cabdullhi Faarax (Baroodo) calan-sidaha 2-aadne waa Cabdullahi Sheikh Aweys,halka Sargaalka 4-aad uu yahay Bashiir Colaad.
Kullankii koowaad ayaa 12-kii bishaan ka dhacay garoonka Denis Sassou ee magaalada Dolisie, waxa uuna kusoo dhammaaday 1-0 oo ay ku badisay kooxda reer Itoobiya ee Saint George, waxaana dhex dhexaadinyay garsoorayaal kasoo jeeda DR Congo.
Saint George iyo AC Leopards ayaa ciyaartooda waxa ay ka dhici doontaa Addis Ababa Stadium, waxaana horay qorshaha uu ahaa in lagu ciyaaro Garoonka Hawassa ee magaalada Awasa ee Itoobiya.
Sikastaba Garsoorayaasha Soomaaliyeed ayaa sanadkaan billowga ah dhex dhexaadiyay kullan dhex maray Al Merreikh iyo Djibouti Telecom kana tirsanaa Arab Club Championship, iyo ciyaar ay is wajaheen kooxaha Sony Ela iyo ALMerrikh kana mid aheyd kullamadii wareega hore ee CAF Champion League.